सैमसंग ग्यालेक्सी S7 बनाम सैमसंग ग्यालेक्सी S6, त्यस्तै बढी? | ग्याजेट समाचार
सैमसंग ग्यालेक्सी S7 बनाम सैमसंग ग्यालेक्सी S6, त्यस्तै बढी?
सामसुले अन्तमा आफ्नो नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 प्रस्तुत गरेको छ, एक उच्च-टर्मिनल जुन कम्पनीको फ्ल्यागशिप हुनेछ, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 लाई बदल्दैतर के यो वास्तवमै परिवर्तनको लायक हो? के ग्यालेक्सी एस really वास्तवमै तपाईंको बाँकी स्मार्टफोनबाट ठूलो परिवर्तन हो? यो हामी अर्को प lines्क्तिहरूको समयमा जवाफ दिन प्रयास गर्ने छौं, पुरानो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 लाई नयाँ ग्यालक्सी S7 सँग तुलना गर्दै.
यस अवस्थामा तुलना हामी यसलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 र ग्यालक्सी S7 को बीचमा गर्नेछौंतिनीहरूका परिवारहरूका आधारभूत मोडेलहरू जुन पछि अधिक जटिल र शक्तिशाली मानिसहरूमा नेतृत्व गर्नेछ जस्तै एज संस्करण वा नोट संस्करण। जे भए पनि हामी यहाँ केवल साधारण वा आधारभूत मोडेलको बारेमा कुरा गर्ने छौं, यद्यपि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, उनीहरूसँग केही आधारभूत छैन।
9 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 मा निष्कर्ष
सैमसंग ग्यालेक्सी S6
सैमसंग ग्यालेक्सी S7
प्रोसेसर Exynos 7420 XNUMX२० अष्टकोरे Exynos 8890 XNUMX२० अष्टकोरे
स्क्रिन "दस QuadHD रिजोलुसनको साथ १ सुपरमोल्ड « "। QuadHD रिजोलुसनको साथ १ सुपरमोल्ड «
आन्तरिक भण्डारण । 32 Gb G 64 जीबी वा १२128 जीबी » G२ जीबी + माइक्रोएसडी
ब्याट्री १,2.550१० एमएएच 3.000 mAh
कनेक्टिविटी "वाइफाइ ब्लूटूथ G जी (m०० एमबीपीएस) NFC » "वाइफाइ ब्लूटूथ G जी (m०० एमबीपीएस) NFC माइक्रोस्ड स्लटको साथ डुअलसिम »
क्यामेरा «१ MP MP5सांसदf/ 1.9 " » 12 सांसद 8 सांसदf/ 1.7 "
मूल्य 475 XNUMX यूरो 719 यूरो
पहिलो हेराईमा, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 र ग्यालक्सी S7 को डिजाइन बीचको फरक धेरै फरक पार्दछ, केही पनि होइन। तर यदि हामीले केहि स्क्र्याच गर्‍यौं भने हामी देख्दछौं कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 छ एक अधिक पॉलिश र कम्प्याक्ट फिनिश जुन नयाँ उपकरणसँग देखि मोबाइल संग पानी प्रयोगको सम्भावनालाई पनि अनुमति दिन्छ IP68 प्रमाणीकरण जसले प्रमाणित गर्दछ कि यो पानी प्रतिरोधी छ। थप रूपमा, धातुको टचहरूको साथ फिनिशले अन्य स्मार्टफोनहरू भन्दा धेरै उत्कृष्ट बनाउँछ, यद्यपि यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस in मा अझै समान छ, तर सायद कम कम्प्याक्ट छ। S6 मापन १ 7२..142,4 x .69,6 .7,9। X x6मिमी छ जबकि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S142,1 १ 70,1२.१ x .6,8०.१ x XNUMX मिमी छ। यो बिना कहिकै जान्छ कि यी उपायहरूको बाबजुद, यस सन्दर्भमा विजेता सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 हो.
सामसु Galaxy ग्यालेक्सीको पर्दा सँधै राम्रो भएको छ र यस पटक, द्वंद्वयुद्ध दुई टाइटन्स बीच छ। नयाँ ग्यालक्सी एस we मा हामी क्वाडएचडी रिजोलुसनको साथ .7.१ ईन्च स्क्रीन फेला पार्दछौं, ग्यालेक्सी एस model मोडेलमा उही रिजोलुसन र साइज, तर भिन्नताका साथ। S7 स्क्रीन वाटरप्रूफ छ भिजेको औंलाहरूका साथ पर्दा प्रयोग गर्न अनुमति दिदै। यस सन्दर्भमा, यो भन्नु पर्दछ कि नयाँ टर्मिनलले पुरानो ग्यालक्सी S6 लाई पार गर्छ।
एक राम्रो स्मार्टफोन छनौट गर्दा पावर जहिले पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हुन्छ, कहिलेकाँही स्क्रीनको भन्दा बढी। यस अवस्थामा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 सँग प्रोसेसर छ Exynos 88904XNUMX ० अक्टोर र G Gb को मेम मेमोरीजबकि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 प्रोसेसर छ Exynos 7420 3२० अष्टक्योर G Gb रैम मेमोरीको साथ। यस अवस्थामा, GPU मा पनि परिवर्तनहरू छन्। सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस In मा माली टी 6० ले एक उपस्थिति बनायो तर ग्यालेसी एस in मा, जीपीयू सुधारिएको छ पहिलो मोडेलको तुलनामा %०% सम्म, केहि विशेष गरी यसको प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्छौं।
त्यसैले यस पक्ष मा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 जीत.
हामीले जडानमा परिवर्तनहरू पनि देख्यौं। जहाँ सम्म सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 मोडेलमा एक doutsim संस्करणग्यालक्सी S7 को मामला मा, यस पक्ष को कनेक्टिविटी फरक छ किनकि यो मात्र मानक को रूप मा ड्युअल सिम छ तर पनि एउटा सिम कार्डलाई माइक्रोसडले बदल्न सक्दछ र उपकरणको आन्तरिक भण्डारण विस्तार गरिएको छ। यद्यपि यो ठीक छ, टर्मिनलको लागि कमजोर बिन्दु हुनसक्दछ किनकि यसले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस than भन्दा सजिलैसँग रिसाउन सक्छ।
जडानको सम्बन्धमा, सिर्जना गरिएको कमजोरीको बाबजुद, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 यस सम्बन्ध मा जीत.
को ब्याट्री सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 ,3.000,००० mAh हो जबकि ग्यालक्सी एस सँग २6० एमएएच ब्याट्री छ। यसका लागि हामीले AMOLED स्क्रिन थप्नु पर्छ जुन सामान्य स्क्रीन भन्दा कम खपत गर्दछ र सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 प्रोसेसर जुन अझ कुशल छ। दुबै द्रुत चार्जिंग छ, त्यसैले हामी यो भन्न सक्दछौं कि यस सन्दर्भमा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 जीत, यसको सफ्टवेयरको परीक्षण गर्नुपर्नेछ, केहि ब्याट्रीले केही घण्टामा टाढा जान सक्छ। जे होस्, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 जीत यसको हार्डवेयरको लागि र यसका लागि बराबर अनुकूलनको लागि यसको ठूलो स्वायत्तता.
क्यामेराको पक्षमा, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 ले १२ MP MP क्यामेरा मात्र समावेश गर्दैन सेन्सरf/ 1.7 को अपर्चर हुन सक्छ जसले यसलाई मोबाइल संसारमा सबै भन्दा राम्रो क्यामेरा बनाउँछ। थपमा, पिक्सेलमा यसको चौडाईले फोटोग्राफमा 95%% बढी प्रकाश राख्छ। सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस of को मामलामा, रियर क्यामेरा १ MP MP हो तर सेन्सर अपर्चरf/ १.6 छ जसले छविहरूलाई गाढा र कम रिजोलुसनको साथ बनाउँछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 मार्च ११ मा बिक्री मा जानेछ 719 .XNUMXeयुरो, एक उच्च मूल्य। यसको सट्टा सैमसंग गलाजी S6 हामी सक्दछौं कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्। 475 e7 यूरो को लागी S7 को तुलनामा पर्याप्त कटौती। सत्य यो हो कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस of को खबरको बाबजुद मूल्य धेरै प्रयोगकर्ताहरूका लागि आधारभूत कारक र निर्धारण कारक हो, त्यसैले हामी विश्वास गर्छौं कि यस पक्षमा, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 जीत.
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 मा निष्कर्ष
धेरै स्मार्टफोन निर्माताहरूले नयाँ मोडलहरूको ह्या the प्राप्त गर्दैनन्। धेरै जसो भिन्नताहरू प्रायः कम हुन्छन्, तर यस अवस्थामा सामसु्गले नयाँ मोडेलको साथ भिन्नता राख्यो। यदि सैमसंग ग्यालेक्सी S6 वास्तवमै तपाईलाई धेरै नै लाग्यो, संग सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 पावरले तपाईंलाई प्रभाव पार्नेछ साथै सबै पक्षहरू पनि। जहाँसम्म, मलाई लाग्छ कि डिजाइनको दुई कमिहरू छन्, एउटा पानी प्रतिरोध, एक प्रतिरोध जुन हानिकारक हुन सक्छ यदि हामी माइक्रोएसड कार्ड स्लट गलत रूपमा बन्द गर्‍यौं भने। र दोस्रो नकारात्मक पक्ष हाइब्रिड कूलि system प्रणाली हो। यो प्रणाली ग्लोब टेराकेओको केहि क्षेत्रहरूमा असुविधा हुन सक्छ र टर्मिनलको प्रदर्शनलाई उल्लेखनीय रूपमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
यी सबैका बावजुद, यदि मैले अहिले नै छनौट गर्नु पर्छ भने म सैमसंग ग्यालेक्सी एस with सँग टाँसिरहन्छु र यदि मूल्य एक कमी हो भने, यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 खरीद गर्न प्रतीक्षा गर्न राम्रो छ। यस अवस्थामा, यो प्रतिक्षा यसको लायक हुनेछ वा कमसेकम त्यो मलाई लाग्दछ तिम्रो के बिचार छ? तपाईले नयाँ टर्मिनलको बारेमा के सोच्नुभयो? र ग्यालक्सी S6 को तुलना?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » सैमसंग ग्यालेक्सी S7 बनाम सैमसंग ग्यालेक्सी S6, त्यस्तै बढी?
Puffff, एक बर्ष भन्दा कम पुरानो फोन भएको र CyanogenMod को साथ गडबड गर्न सबैभन्दा खराब हुनुपर्दछ।
के तिनीहरूले अद्यावधिकहरू लिन गइरहेका छैनन्?
आइस्डीलाई जवाफ दिनुहोस्
Xperia X, सोनीबाट स्मार्टफोनको नयाँ परिवार